मातातिर्थ औसीको गरिमा एबं महिमा - Lekhapadhi विचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २८ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:०९ मा प्रकाशित
आज वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति’ यिनै महिमा बोकेकी आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् मातातीर्थ औँसी कसरी विदेशी वा आयातित संस्कृती भयो ? हाम्रो शास्त्रहरूमा आमालाई बुवाभन्दा उच्च स्थानमा राखिएको पाइन्छ । यसरी श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गरिएकी आमालाई मीठो खान तथा राम्रो लगाउन दिई छोराछोरीहरूले आमाबाट शुभ-आशिर्वाद ग्रहण गर्ने प्रचलन नेपालमा रहेको यो परमपरा कसरी आयातित हुन सक्छ ?
ती गोठालाहरूमध्ये एउटाकी आमा थिइन् भने अरु गोठालाहरुकी आमा थिएनन् । त्यही आमा हुने गोठालाले फालेको रोटीको टुक्रा भने हराएन । त्यहाँ आमा नहुने गोठालाहरूले फ्याँकेका रोटीका टुक्रा मात्रै हराउने गर्थे । त्यो दिन आजकै बैशाख कृष्णपक्ष औँसी थियो ।
जनश्रुति अनुसार, काठमाडौंको थानकोट नजिकै अवस्थित मातातीर्थमा गोठालाहरूले गाई-बस्तुहरू चराउने मैदान थियो । जहाँ एक दिन एउटा गोठालाले फ्याँकेको रोटीको टुक्रा अनाचक हराउन पुग्यो । त्यो घटनाले गोठालाहरू अचम्मित भए । गोठालाहरूले पुनः अरु रोटीका टुक्राहरू पनि फ्याँके । ती टुक्राहरू क्रमशः हराउँदै गए । ती गोठालाहरूमध्ये एउटाकी आमा थिइन् भने अरु गोठालाहरुकी आमा थिएनन् । त्यही आमा हुने गोठालाले फालेको रोटीको टुक्रा भने हराएन । त्यहाँ आमा नहुने गोठालाहरूले फ्याँकेका रोटीका टुक्रा मात्रै हराउने गर्थे । त्यो दिन आजकै बैशाख कृष्णपक्ष औँसी थियो । यो कुरा बिस्तारै सबै गाउँलेहरूले पनि थाहा पाए । गाउँलेहरूले उक्त दिन मृत्यु भइसकेका आमाले छोराछोरीले दिएका चिज खाँदा रहेछन् भन्ने विश्वास गरे ।
संसारको सबैभन्दा पवित्र नाता, आमा, संसारको सबैभन्दा पवित्र सम्बोधन हो, ‘आमा’ । हामी सबैले सर्वप्रथम बोल्न सिकेको शब्द, हो आमा । अनि पल-पलमा सम्झना आउने, दुःख-सुखमा झझल्को आउने एउटा अनुहार, हो ‘आमा’ ।
हरेक वर्ष यही बैशाख कृष्णपक्ष औँसीका दिन मातातीर्थको चौरमा आमाको मृत्यु भइसकेका मानिसहरुले अनेकन मिष्ठान भोजनहरु चढाउन थाले । त्यस पछि त्यहाँ एउटा कुण्ड समेत बनाइयो र मातातीर्थका नामले प्रचलनमा ल्याइयो । आजकै दिन मातातीर्थमा धुमधामका साथ मेला लाग्ने गर्छ । यसरी हरेक वर्ष आमा नहुनेहरूले मातातीर्थमा गई त्यहाँको कुण्डमा नुहाउने र मृतक आमाका नाममा मीठा-मीठा खाद्य पदार्थ चढाउने प्रचलन कायम भयो । आमाप्रतिको श्रद्धास्वरूप मातातीर्थमा ‘साझा आमा’ को मूर्ति समेत स्थापना गरिएको छ । आमाप्रति विशेष भक्ति र भावयुक्त सम्मान गरिएको हुँदा यो दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिन पनि भनिन्छ ।
संसारको सबैभन्दा पवित्र नाता, आमा, संसारको सबैभन्दा पवित्र सम्बोधन हो, ‘आमा’ ।
अझैं यो दिनलाई मातातीर्थ औँसी, मातृऔँसी एवं मातृ दिवस पनि भन्ने गरिन्छ । यसैलाई अंग्रेजीमा ‘मदर्स डे’ का नामले विश्वका धेरै मुलकमा प्रचलनमा ल्याइएको मेरो अनुमान छ । संसारको सबैभन्दा पवित्र नाता, आमा, संसारको सबैभन्दा पवित्र सम्बोधन हो, ‘आमा’ । हामी सबैले सर्वप्रथम बोल्न सिकेको शब्द, हो आमा । अनि पल-पलमा सम्झना आउने, दुःख-सुखमा झझल्को आउने एउटा अनुहार, हो ‘आमा’ ।
आजभोली त मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालहरूका माध्यमबाट पनि आमाप्रतिका भावना तथा सम्झनाहरू व्यक्त गर्न थालेका छन् । पौराणिक कालदेखि नै मनाउँदै आइएको आमाको मुख हेर्ने दिन आमाले गरेका महान र कष्टपूर्ण कामहरूको सम्झना गरिन्छ । आमा नभएकाहरूले पनि आमाको आत्माको मुक्तिको कामना गर्दै आज श्राद्ध तर्पण गरी मातृत्वको स्मरण गर्ने गर्दछन् । जुन आमाले हामीलाई ९ महिना गर्भमा राखेर जन्म दिइन् । अनि काखमा राखेर पालिन् । ममता कि खानी अनि बालापनामा हाम्रा हरेक इच्छा, आकांक्षा र चाहानालाई पूरा गरिदिने कल्प वृक्षसरी, पृथ्वी वा धर्तिकी उपमा आमा को मुख हेर्ने दिनको सबै आमाहरुमा शुभकामना !
यद्धपी यो वर्ष कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको प्रकोप तिब्ररुपले फैलिएको छ, जसले गर्दा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारि गरिएकोले एक स्थानबाट अर्को स्थान वा ममताकी खानी आमा भएको ठाउँ सम्म जाने बातावरण छैन, त्यसैले जो जहाँ छौं त्यहीबाट विज्ञान र प्रविधीको प्रयोग गरेर हुन्छ की मन मनै सम्झेर वा कल्पेर माता तिर्थ औसीं मनाऔं ।
घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं, आमाहरुको दिर्घ जिवन र सुस्वास्थ्यको कामना गरौं । यस लोकका सम्पूर्ण आमाहरूलाई कोटी-कोटी नमन छ ।